County inozivisa shanduko kugozha wekudzivirira - princetoncovid.org
County inozivisa shanduko pakuparadzirwa kwejekiseni
Iyo Mercer County Division yehutano yakazivisa kutanga kwesvondo rino kuti yaita shanduko pakuparadzirwa kwejekiseni zvichienderana nemutemo weNJ weDzidziso. Ndapota tinya pano yeiyo Kukadzi 10 Yekudzivirira Kuvharidzira.
** Ndokumbira utarise: Kana iwe uine wechipiri dhizaini yakarongwa nePrinceton Hutano Dhipatimendi, iwe unozogamuchira iyo dosi pazuva rakarongwa.
Kunyoresa Kubaya - Joinha wekumirira uchishandisa iyo New Jersey Vaccination Kuronga Sisitimu. Kuzadza fomu yekutanga kunyoresa kunotora maminetsi gumi nemashanu. Iwe uchazobvunzwa mimwe mibvunzo kuti uone kana iwe uchikodzera kupihwa mushonga. Kana iwe uchinetseka nehunyanzvi nekunyoresa, fonera iyo COVID Kuronga Rubatsiro Runhare pa (15) 855-568 kana zadzisa izvi Rubatsiro Fomu.
Riripo Rondedzero - Kana iwe uri pane yePrinceton yekumirira, unozofonerwa neMercer County Chikamu cheHutano uye / kana iyo Princeton Hutano Dhipatimendi kana iwe wakasarudzirwa musangano. Kana iwe uri pane yekumirira uye unogamuchira jekiseni rako kune imwe nzvimbo, ndapota e weDhipatimendi Hutano Hwehutano kuti abviswe kubva kune vanomirira. Ndokumbirawo usataure nebazi nezve zvakagadzwa kana chinzvimbo chekutarisira